हिमाल खबरपत्रिका | ‘हामीले जे गरिराखेका छौं, यसरी समृद्घि आउँदैन’
‘हामीले जे गरिराखेका छौं, यसरी समृद्घि आउँदैन’
लेखकको परिचय बनाइसकेका पत्रकार मोहन मैनाली प्रशिक्षक पनि हुन्। फिचर लेखनमा दक्खल राख्ने उनको तेस्रो कृति मैले देखेको देश बजारमा आएको छ। यसअघि उपल्लो थलो (२०६९) र मान्ठा डराएको जुग (२०७१) बाट प्रशंसा बटुलेका मैनाली भन्छन्, “यथेष्ट मात्रामा सही सूचना संकलन भएको छ भने नराम्रो लेखौं भन्दा पनि राम्रै हुन्छ।”
देशभित्र के के देख्नुभयो र देखेको देश लेख्न प्रेरित हुनुभयो ?
पुस्तकमा मैले आफूले देखेका, आफूसँग भएका र आम मान्छेलाई काम लाग्ने जानकारी दिएको छु । नेपालको भौगोलिक परिवेशदेखि वातावरण, विकास र समाजका कुरा छन् । समृद्धिमा जान हामीलाई के–केले अवरोध र सहयोग गरेका छन् भन्ने पनि छ । पुस्तकमा पत्रकारिता छ, पुस्तक छ र आफ्नाबारे पनि लेखेर टुंग्याएको छु ।
अहिले त देशमा समृद्धिकै नारा घन्किएको छ नि !
हामीले जे गरिराखेका छौं, यसरी त समृद्धि आउँदैन । गाउँ मासिराखेका छौं, शहर पनि बिगारिरहेका छौं । समृद्धिको भूतले त्यसको मूल आधार वातावरण विनाश गरिरहेको छ ।
पत्रकारिता, वृत्तचित्र र किताबमध्ये कुन माध्यम बढी प्रभावकारी हुने रहेछ ?
पत्रकारिताबाट निश्चित विषयमा समस्याको यौटा पाटो मात्र देखाउन सकिन्छ, त्यसले बृहत् आयाम समेट्न सक्दैन । वृत्तचित्रमा संवेग र भावनासँग सम्बन्धित कुरा सम्प्रेषण गर्न सहज हुन्छ । पुस्तकमा चाहिं अलि बढी गहिरिएर, विभिन्न पाटालाई व्यापक रुपमा छिचोल्न सकिन्छ ।
तपाईं आख्यान लेख्दिनँ भन्नुहुन्छ, गैर–आख्यानमा के महत्वपूर्ण हुन्छ ?
गैर–आख्यानमा जे लेखिने हो त्यसबारे अरुले भन्दा बढी जानकारी राख्नुपर्छ । अर्थात् आफैं अवलोकन र धेरै सूचना संकलन गर्ने । प्रस्तुतिको कुरा दोस्रो हो । सूचना राम्रो र धेरै संकलन भएको छ भने नराम्रो लेखौं भन्दा पनि राम्रै हुन्छ । पाठकमा कौतूहल जगाउने, सलल बगेको भाषा जस्ता आख्यान लेखनका राम्रा तरिका जे–जे हुन्छन् ती पनि अपनाउनुपर्छ । म चाहिं जटिललाई सजिलो र सजिलोलाई अझ सजिलो बनाएर लेख्ने गर्छु ।
पूर्वी पहाडको एउटा यात्रा संस्मरण लेख्ने तयारीमा छु । दुई वर्ष त लाग्ला ।